फोटोग्राफरहरूको लागि SEO: SEO Newbies को लागी १२ सल्लाहहरू - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / फोटोग्राफरहरूको लागि SEO: SEO Newbies को लागी १२ सल्लाहहरू
के तपाई फोटोग्राफर हुनुहुन्छ जुन गुगल रैंकिंगको बारेमा केही थाहा छैन? फोटोग्राफर गाइडहरूको लागि यस एसईओ मा, हामी तपाइँलाई तपाइँको एसईओ खेल कसरी सुधार गर्ने सिकाउँदछौं!
तपाइँको सुरुवात गर्दै फोटोग्राफी क्यारियर अनलाइन? तपाईंको साइटमा तपाईंको पोर्टफोलियो अपलोड गर्दै?
यो फोटोग्राफरको पोर्टफोलियो एक सफल व्यवसाय को लागी एक उत्तम हतियार हो। यो कौशल, अनुभव र कडा परिश्रमको वर्षौंको प्रदर्शन हो।
शीर्ष फोटोग्राफरहरूको ब्लगको बारेमा धेरै चीजहरू मध्ये, के तपाईंलाई थाहा छ के सहयोग गर्दछ? यो फोटोग्राफरहरूको लागि राम्रो SEO हो। खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनले तपाईंलाई सफल हुन आवश्यक दृश्यता प्रदान गर्न सक्छ।
त्यहाँ राम्रो पोर्टफोलियो अनलाइन हुनुको कुनै मतलब छैन यदि कसैले फेला पार्न सकेन भने।
यदि तपाईं भित्र हुनुहुन्छ फोटोग्राफी SEO, तपाइँ यसको फाइदा लिन के गर्न सक्नुहुन्छ? हामी १२ सुझावहरु छन् कि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी पक्का छौं तपाइँको साइट लाई बढावा दिन सक्छौं। उनीहरु बाट अधिक दृश्यता प्राप्त गर्नुहोस्।
यहाँ छ तपाइँ यो कसरी गर्नुहुन्छ।
१. कुञ्जीशब्दहरू, कीवर्डहरू, कीवर्डहरू
कुनै पनि वेबसाइटको मुटु र आत्मा कुञ्जी शब्द हुन्। फोटोग्राफरहरूका लागि यसको मान फोटोग्राफी कुञ्जी शव्दहरू बाहिरको कुनै पनि कुरा भन्दा उच्च छ। ग्राहक खोजहरू मिलाउन तिनीहरूलाई सही वाक्यांशहरू चाहिन्छ।
कीवर्ड रिसर्च गर्दा, सम्बन्धित शब्दहरू फेला पार्नुहोस् फोटोग्राफी। लामो पूंछ वाक्यांशहरु कि मानिसहरु तपाइँको जस्तै व्यवसाय खोज्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। आजको मोबाइल र आवाज खोज को आगमन मा, यो प्रश्न को रूप मा राम्रो संग आउन सक्छ।
चाहे यो WordPress को लागी हो फोटो ब्लग वा विवाह फोटो वेबसाइट, यहाँ सत्य हो। तपाईं चाहानुहुन्छ फोटोग्राफी खोजशब्दहरू कम प्रतिस्पर्धा, उच्च मूल्य। यसले तपाईंलाई दर्जा र ट्राफिकमा द्रुत बृद्धि दिन सक्छ।
एकचोटि तपाईले लामो पूंछ वाक्यांशहरूको लागि स्तर निर्धारण गर्नुभयो, यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ। तपाई उच्च मानको कुञ्जी शब्दहरूको लागि सर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको व्यवसायको लागि बलियो प्रासंगिकता निर्माण गर्न तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
२. धेरै सम्भावित ब्याकलिks्कहरू उत्पादन गर्नुहोस्
कुनै पनि डिजिटल मार्केटरको आर्सेनलमा ब्याकलिks्कहरू सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारहरू हुन्। यसले तपाईंको दृश्यतालाई कडा बढावा दिन सक्छ। यो किनभने गुगलले मतलब गर्दछ जब साइटले ब्याकलि back्कहरू प्राप्त गर्दछ। यो स्रोत प्रासंगिक र उच्च प्राधिकरण वेबसाइटहरू हुन चाहन्छ।
लिंक गर्न उच्च प्राधिकरण वेबसाइटहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ फिर्ता। तपाईं सकारात्मक अधिकारको साथ सम्बन्धित वेबसाइटहरूको साटोमा बसोबास गर्न चाहानुहुन्छ।
अतिथि पोष्टिंगको साथ फोटोग्राफी लंगर पाठ को रूप मा taglines तपाइँको जीवन रेखा हो। यी तपाइँको साइट मा अतिरिक्त लि juice्क रस थप्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं धेरै सान्दर्भिक वेबसाईटहरूमा लिंकहरूको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। टुटेको लिंक भवन मार्फत त्यसो गर्नुहोस्। तपाईं लिंक गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ फिर्ता फोटोग्राफी संग सम्बन्धित शब्दहरु को लागी तपाइँलाई।
तपाईंलाई कम-मूल्य ब्याकलिks्कहरू आवश्यक पर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईं प्रासंगिक फोटोग्राफी सम्बन्धित साइटहरू तपाईंलाई लिंक दिँदै चाहनुहुन्छ। तपाइँ फोटोग्राफी सम्बन्धित एक शब्द चाहानुहुन्छ, र यो हो।
Content. सामग्री राजा हो
कुनै पनि शीर्ष फोटोग्राफरको ब्लगका लागि, तिनीहरूलाई एकसाथ जोड्ने एक चीज उत्तम सामग्री हो। SEO मा, सामग्री राजा हो। तपाईं यस्तो सामग्री चाहानुहुन्छ जुन फोटोग्राफी कुञ्जी शब्दहरूको मात्र नभएर तपाईं बहुमूल्य जानकारी पनि दिन चाहनुहुन्छ।
व्यक्ति वर्डप्रेस फोटो ब्लगमा जान्छन् र फेला पार्न मनपराउँदछन् प्रेरणा वा प्राविधिक मदत। तिनीहरू यहाँ छन् तपाईंको विशेषज्ञताबाट सिक्न र तपाईंसँगै काम गर्ने बारे सोच्न पनि। फोटोग्राफी ट्यागलाइन बाहेक, तपाईं आफ्नो सामग्रीको मजा लिन चाहनुहुन्छ।
Be कुराकानी र शैक्षिक। निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको ब्लगमा अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुहोस् र तपाईंलाई के थाहा छ साझा गर्नुहोस्। तपाईंको व्यवसायलाई जानकारीको साथ पूरक दिनुहोस् जसले मानिसहरूलाई तपाईंको कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ बजार मा विशेषज्ञता.
Your. तपाइँको साइटम्याप बुझाउनुहोस्
साइटम्यापहरू आवश्यक लिंक संरचनाहरू हुन् कि तपाइँको वेबसाइट मा तपाइँको सबै सार्वजनिक पृष्ठहरु को सूची। तिनीहरूले गर्न सक्छन् मदत ट्र्याकर र crawlers सूचकांक तपाइँको साइट राम्रो। यदि तपाइँ एक सबैभन्दा राम्रो विवाह फोटो वेबसाइटहरु र जस्तै हुन चाहानुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको साइट को लागी एक चाहिन्छ।
तपाईंको सामग्री प्रदायकको माध्यमबाट साइटम्याप उत्पन्न गर्नुहोस्। पोर्टफोलियो वेबसाइटहरूको लागि, यो सँधै उत्तम CMS को लागि ढाँचा बनाम स्क्वायरस्पेसको चर्चा हुन्छ। तपाईले जसलाई छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो साइटम्याप.एक्सएमएल उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, गुगललाई फर्वार्ड गर्नुहोस् र तपाईको वेबसाइटमा पोस्ट गर्नुहोस्।
जबकि साइटम्याप नहुनु संसारको अन्त्य होइन, यो अरू केहि लागि उपयोगी छ। यसले तपाइँको साइटको खोजी ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरू (SERPs) मा अनुक्रमणिकाको लागि छिटो बनाउँदछ।
Remove. Remove5 हटाउनुहोस् र रिडिरेक्ट्स घटाउनुहोस्
यदि त्यहाँ केहि गुगलले धेरै घृणा गर्छ भने, यो टुटेको पृष्ठहरु र धेरै धेरै रिडिरेक्टहरू छन्। यी गलत संकेतहरू हुन् खोज ईन्जिनहरूमा जुन तपाईंको वेबसाइटमा रातो झण्डा छ। SERPs तपाइँको पृष्ठ अधिकार र पूर्ण श्रेणीकरण मा एक कडा प्रहार संग जवाफ दिनेछ।
कुनै पनि वर्डप्रेस फोटो ब्लगका लागि तपाई यी पृष्ठ त्रुटिहरू प्रबन्ध गर्न चाहानुहुन्छ। स्पष्ट तिनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो बाहिर पठाउनुहोस् वा तिनीहरूलाई सम्बन्धित पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्नुहोस्। त्यहाँ तरिका छन् यी साइटहरू अनइन्डेक्स गर्नुहोस् गुगलमा, र उपकरणहरू प्रयोग गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ।
वेबमास्टरहरू धेरै भएमा रिडिरेक्टहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। कुनै पनि सम्भावित अत्यधिक रिडिरेक्टहरूको लागि आफ्नो साइटहरू क्रल गर्न उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। जहाँ सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहोस् canonicals पनि।
Search. खोज मैत्री युआरएलहरूको लागि जानुहोस्
तपाईंको आफ्नै पृष्ठहरू सिर्जना गर्दा, URL उचित दृश्यताको लागि महत्वपूर्ण छ। फोटोग्राफी कुञ्जी शब्दहरूको साथ अप्टिमाइज गर्नुहोस् जुन तपाइँ छलफल गर्नुहुने शीर्षकसँग सम्बन्धित छ। तपाईं आफ्नो पृष्ठहरूमा रिडनान्सी र नक्कलहरू पनि कम गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईको URL लाई अनुकूलन गर्नका लागि एउटा ठोस सल्लाह उनीहरूलाई खोज मैत्री बनाउनु हो। तपाईं फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित शब्दहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। सम्पूर्ण यूआरएलमा दुई पटक देखाएर ती शब्दहरू रोक्नुहोस्।
किन? गुगलले पृष्ठ शीर्षकबाट यूआरएल र बडी सामग्रीको लागि कुञ्जी शव्दहरू खोज्दछ। यदि तपाइँले उस्तै शब्द राख्नुभयो भने, गुगलले तपाइँलाई कुञ्जी शब्द भरि forको लागि दण्ड दिन सक्दछ। यसले तपाईंको पृष्ठको पूर्ण अधिकारलाई कमजोर पार्न सक्छ।
फोटोग्राफी सम्बन्धित शब्द कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्। समानार्थी शब्द र LSI कीवर्ड माध्यमिक कीवर्डको रूपमा उपयोगी छन्।
Easy. सिर्जित गर्न को लागी आर्किटेक्चर को साथ शुरू गर्नुहोस्
जब यो वेबसाइटहरूमा आउँदछ, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ यो तार्किक वास्तुकला सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छैन। त्यो गलत छ।
तपाईको पोर्टफोलियो साइटको लागि यो फार्म्याट बनाम स्क्वायरस्पेस हो, यहाँ सत्य छ। तपाईं क्रल गर्न सजिलो चाहनुहुन्छ, विवाह फोटो वेबसाइटहरू नेविगेट गर्न सजिलो।
प्राकृतिक क्रोल संरचनाहरू सिर्जना गर्ने एउटा तरिका साइलो संरचनाहरू प्रयोग गर्नु हो। सबै सम्बन्धित शीर्षक एक एकल कोटीमा जडान गर्नुहोस्। समर्थन सामग्री समान संरचना भित्र मात्र राख्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले सिलोहरू एक अर्कासँग जडान गर्नुपर्नेछ, अवतरण पृष्ठहरू सन्दर्भ गर्नुहोस्। यसले गुगललाई तपाईंको सामग्रीलाई उनीहरूको प्रासंगिक स्थानहरू भित्र हेर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
Page. पृष्ठ शीर्षक र मेटा विवरण अप्टिमाइज गर्नुहोस्
पृष्ठ शीर्षक र मेटा विवरण Google लाई तपाइँको विषयहरु को बारे मा बताउन मा महत्वपूर्ण छन्। शीर्ष फोटोग्राफर ब्लगहरु को धेरै सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरुको पृष्ठ शीर्षक हो स्पष्ट, संक्षिप्त र "क्लिक योग्य"। तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ?
पृष्ठ शीर्षकहरूको लागि, तपाइँ तपाइँ तपाइँको सामग्री सारांश गर्न चाहनुहुन्छ। उच्च मूल्यको फोटोग्राफी कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले ब्लगमा मेटा "Buzzfeed शैली" हेडलाइटहरू छन्। तिनीहरू सजिलो, मोहित छन् र मजबूत किवर्डिंग प्रयोग गर्दछ।
मेटा वर्णनको रूपमा, Google नोट गर्दछ कि उनीहरूको पछाडि रैंकिंगमा कुनै प्रभाव पर्दैन। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उत्तम तरिका तपाईंको व्यवसाय ब्रान्डि .को लागि हो। तपाईंको सामग्रीमा व्यक्तिले के आशा गर्न सक्छ बारे कुरा गर्नुहोस् र क्लिक गर्न पाठकहरूलाई फसाउँनुहोस्।
Image। छवि वर्णन र अल्ट पाठमा फोटोग्राफी ट्यागलाइनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ धेरै वर्डप्रेस फोटो ब्लगहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ, यो तपाइँको लागी जान्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि गुगल छविहरु पढ्न सक्दैन। Google ले यसलाई पाठ को रूप मा देख्छ र छवि को लागी कुनै मूल्य देख्दैन। लाई मदत तपाइँको वेबसाइट रैंक, तपाइँ छवि विवरण र alt पाठ गर्न को लागी आवश्यक छ मदत खोज ईन्जिनले तिनीहरूलाई पहिचान गर्दछ।
छवि वर्णनको लागि, तपाईं फोटोग्राफी ट्यागलाइनहरू थप्न चाहानुहुन्छ। शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंले आफ्नो शरीर सामग्रीमा सामानहरू रोक्नको लागि प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ, फोटो प्रयोग गर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
वैकल्पिक पाठका लागि तपाईले LSI र सम्बन्धित कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
१०. सामग्री शीर्षक र उपशीर्षकहरूको फाइदा लिनुहोस्
खोज ईन्जिनहरूले उचित सेवाहरूको सामग्री भित्र सेवा गर्दछन्। यदि तपाईं गुगलको साथ द्रुत ब्राउनी पोइन्टहरू चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको हेडिंग र उप हेडिhead्गहरू सेट गर्नुहोस्aसंग स्पष्ट दिमागमा पदानुक्रम।
H1 तपाईको पृष्ठ शीर्षकको लागि हो र अरू केहि होइन। H2 ब्लग मा तपाइँको उप-विषयहरु को लागी सामान्य डिवीजन को रूप मा कार्य गर्नु पर्छ। उनीहरूमा माध्यमिक र LSI खोजशब्दहरू हुनुपर्दछ जुन तपाईंको शीर्षकसँग सम्बन्धित छ।
H3 उपशीर्षकहरू छन् तपाईंको H2 उप-शीर्षकहरू विच्छेद गर्न। तिनीहरू विस्तृत उप-विषयहरूमा उपयोगी छन् र तिनीहरूलाई मानव दर्शकहरूको लागि पढ्न योग्य बनाउँदछन्। H4 का लागि समान काम गर्दछ यदि यो कहिले सम्म आईपुग्छ।
तपाइँको सामग्री मा एक उचित संरचना गर्न सक्छन् मदत तपाइँलाई तपाइँको क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ जस्तै बनाउन बनाउन।
११ आउटबाउन्ड लिंकहरू प्रयोग गर्नुहोस्
आउटबाउन्ड लिंकहरू लिंकहरू हुन् जुन तपाईं अन्य वेबसाइटहरूमा सन्दर्भ गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। जबकि यसले तपाईंको क्रमबद्धलाई सीधा माथि प्रभाव पार्दैन, यी गर्न सक्छन् मदत राम्रो लि link्क जुस र खोजी ईन्जिनको साथ प्रतिष्ठाको साथ। कसरी?
धेरै शीर्ष फोटोग्राफरका ब्लगहरू, प्रदायकको रूपमा फार्म्याट बनाम स्क्वायरस्पेसको पर्वाह नगरी, अधिक प्राविधिक विवरणहरू सन्दर्भ गर्दछन्, उनीहरूको पृष्ठहरूमा होइन। यी आउटबाउन्ड लिंकहरू उपयोगी छन् मदत प्रासंगिकता स्थापना गर्नुहोस्।
गुगलले उनीहरूको शीर्षकहरूको प्रासंगिकताको ख्याल राख्छ। लिंकको एch्कर पाठको रूपमा फोटोग्राफी ट्यागलाइनहरू प्रयोग गरेर, तपाईं Google लाई बताउनुहुन्छ कि आगामी पृष्ठ त्यो शब्दसँग सम्बन्धित छ। यसले तपाईंको लिंक श्रृंखलाको प्रासंगिकता बढाउँछ।
आउटबाउन्ड लिंकहरूको धेरै प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू तपाईंको विषयसँग प्रासंगिक छन् हातमा ताकि तपाईं सक्नुहुन्छ उनीहरूले जे माग्छन् पूरा गर्नुहोस्.
१२. वेबमास्टर उपकरण र एनालिटिक्स प्रयोग गर्नुहोस्
गुगलको वेबमास्टर उपकरण र एनालिटिक्स महत्वपूर्ण उपकरणहरू हुन् जुन गर्न सक्छन् मदत तपाईँलाई मार्गदर्शन। गुगलको मनपर्दो उत्तम अभ्यासहरू मदत निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट उनीहरूको एसईओ दिशानिर्देशहरूसँग अनुरूप छ।
तिनीहरूका वेबमास्टर उपकरणहरू र एनालिटिक्स गर्न सक्छन् मदत तपाइँ संकेतक सिर्जना संग। जब तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा काम गरी रहनु भएको छ यी संकेतकहरु तपाइँको सफलता लाई नोट गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
फोटोग्राफरहरूको लागि SEO व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण छ
फोटोग्राफी संसारमा, दृश्यता तपाईको प्राथमिकता हो यदि तपाई आफ्नो व्यवसाय लाई जान चाहानुहुन्छ। पोर्टफोलियो अधिक व्यवसाय लिनको लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंले निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि मानिसहरूले तपाईंलाई पनि फेला पार्न सक्छन्।
एसईओ फोटोग्राफर को लागी तपाईलाई खोज ईन्जिनमा देखाउन र तपाइँ प्रासंगिक हुनुहुन्छ भनेर देखाउन मद्दत गर्दछ। त्यहाँ धेरै तरीकाले यसो गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू छिटो र सजिलो तरीकाका छन् तपाईले अधिक अधिकार प्राप्त गर्न।
के तपाईं आफ्नो छविहरूको फाइदा लिन र तिनीहरूलाई विभिन्न उत्पादनहरूको लागि प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई ग्राफिक डिजाइनरहरू छन् जो यसलाई कसरी गर्ने भनेर राम्रोसँग जान्नु पर्छ?
हामीलाई कुरा गर्नुहोस् at Print Peppermint र dreamers को लागी उत्पादनहरु पाउनुहोस्। आज अनुभवी डिजाइन र प्रिन्ट विज्ञहरूको मद्दत लिनुहोस्।
← Foil व्यवसाय कार्डहरू: तिनीहरू के हुन्, किन र कहाँ तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ (तत्काल!)
रद्दीटोकरीमा नछोड्नुहोस्: १ Business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू तपाईलाई किपरलाई क्राफ्ट गर्न मद्दत गर्दछ